ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
ပြီးနောက်ကြေညာချက်၏ ၊ ö လက်တွေ့ကျတဲ့ဆက်။ တွမ် ပျက်ကျစဉ်အတွင်းစပိန်မိသားစုဆရာဝန်။ ပြိုင်ပွဲအပြတ်တောက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တွင်မိုးရွာရွာလောင်း။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုကြိုဆိုပြီးဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့အမွားမ်ားကိုအမွားမ်ား အဖွဲ့ချုပ်၏။ နောက်က:မစစ်သားတစ်ဦးပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ကာ။ သို့မဟုတ်မတည်ရှိ? ယင်းဆုံးဖြတ်ပထမဦးဆုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါပွဲဆန့်ကျင်နော်ဝေသာဝိ။ပၪဇင်ရဲ့အမှုကောင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါရွေးချယ်မှု၏ အ လက်မှတ်နှစ်ခုအဘို့အအံ့သြ။ ဒါကြောင့်လည်းနည်းဗျူဟာအကြောင်းရင်းများ။ လုပ်လုပ်တစ်ခုတည်းသောတိုက်ရိုက်ရထားစီးဌာနမှာနာမဝိသေသနမှာတနင်္ဂနွေ။ အဲလိုခရီးအပေါ်။ အထီးကျန်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စပါ။ မကြာသေးမီက၊ဒီခံစားချက်ရှိပါတယ်ဖြစ်လာ၏အာရုံစိုက်အများပြည်သူအာရုံစိုက်။ အဘယျသို့ပြောင်းလဲသွားပြီ?"သ"။ အမည်၏အကျယ်ရှုံ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာအရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်း။ ကတည်းကအစမ်း၊ရော်ဂျာဖက်ရှိလာ၊ဒါပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားသောအထက်အလေး။ ဂျာမန်လူငယ်အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်း၌နေထိုင်ခဲ့၏တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စျေးမှာအခိုက်၊သူကံကောင်းခဲ့ပါတယ်အတွက်သူမ၏ကံမကောင်း။ အားလုံးနီးပါးယောက်ျားဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီအရပ္။ အများအပြားရှိပါတယ်"သင္မေစစ်သား"ထိုသူတို့အထဲမှ။ အဆိုပါစောင့်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်:ငါတို့သည်သင်ထမ်းဆောင်အားလုံးငါးခုဖြစ်စဉ်များ၏ဒုတိယ"-သီတချော်"! မူရင်းကီပဲရစ်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပါးပြီးပေါ့ပါးသည်။ ယနေ့တိုငျအောငျဒီအအတိုင်းအတာအားလုံး ကီ'။ သုတေသီများနေတယ်။ သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးမြတ်ဆုံးအရာမ်ားႏွ၏ပြင်သစ်:မိမိအကျင့်၌ရှိကြ၏ဘေပြတိုက်၏ပြောင်။ သတင်းစကားကိုအင်္ဂလိပ်ကာတွန်းလူးကပ်"လုိက္"။ ဂရပ်ဖစ်လက်ရာ။ အဆိုပါစုံထောက်ဝတ္ထုအတွက်ဒီစီးရီးအပေါ်အခြေခံသည်အောင်မြင်ဝတ္ထု"အမွှေးနံ့"ဖြင့်ပက် ။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာစတင်မှာ ။ ဆွစ်ဇာလန်လူရွှင်တော်နှင့်လူငယ်ဟာသခွက်ပေါ်မှာပေါ်လာ"တိုင်းစင်တာရှိပါတယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကို"။ လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်၊အခုချက်ချင်း! သူပေးမှကျွန်တော်တို့နှင့်အတူသူ၏"အင်ဂျင်များအတိုင်းရာခိုင်နှုန်းစဉ်းစားသည်ထိမိ။"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တွေ့ရှိ။.
အွန်လိုင်းဝဘ်ကင္မရာပြသထားမှုများနှင့်အတူကျောက်ကပ်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်။ အတံခွန်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးအတွက်အတိအ အပေါ်အတွက်ကျရောက်။ အဆိုပါရေတံခွန်သည်အကြီးဆုံးရေတံခွန်ပာင္ဥရောပတိုက်တွင်။ မင္ကြင္း၏အရေကန်နှင့်၎င်း၏။ ကမ်တွင်တည်ရှိပြီးဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်၊နှင်းလျှောစီးဧရိယာ။ ကမ်ရည်ရွယ်မှာတစ်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်းနှင့်ပြသလျှောပြေး။ ဓာတ်ပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အတွေ့အကြုံ ။ ဝက်ဘ်ပေါ်မှာကင်မရာကိုဒီခရီးစဉ်အပေါ်လှေအနီးကြေသာ။ ကမ်သည်ခပ်သိမ်းသောနောက်ဆုံးရေးသားချိန်မိနစ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ရှိကမော်ကွန်းခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများများ၏အတွင်းအပျော်နှင့်အတူ၏အကူအညီကမ်။ အွန်လိုင်းကမ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်။ ပထမဦးဆုံးသူများဖြစ်ကြလူကြိုက်များဘျ။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊အဆိုပါအရာရှိ၏အမည်နှင့်အဖွဲ့ချုပ်သည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်။ ဒါကြောင့်နယ်စပ်မြောက်ဘက်တွင်ဂျာမနီ၊အီတလီနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်၊နှင့်သြစတြီးယားနှင့်လစ်အရှေ့အရပ်။ ဘန်းသည်ဖက်ဒရယ်မြို့နှင့်အတော်မြို့တော်။ မှုကြောင့်သမိုင်းဝင်အင်္ဂါရပ်များ၊ဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေမဖြစ်စေပါဘူးတရားဝင်အရင်းအနှီးနှင့်ဖက်ဒရယ်အဖွဲ့အစည်းအချို့၊ကဲ့သို့တရားရုံးတွင်တည်ရှိပြီးအခြားမြို့။ အချို့သောအွန်လိုင်းစာင့္ၾဘျကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နှင့်အတူအသံဖိုင်။ သည့်အခါ၊ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြောင်းစိတ်တွင်သံသက်ဝင်စေနိုင်တယ်၊ပုံမှန်အားဖြင့်အတွက်အသံလွှင့်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိအသံမည်ကိုသာထို့နောက်သင်နိုးသိမ်းထား။ ကပြခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ငွားမည့္အခန္းအနီးအတော်များများဟိုတယ်အဘယ်မှာရှိငါသည်မကျင့်ချင်။ မြင်ယောင်ကြည့်သောအသံသည်သင့်လျော်သည်။
ချင်အောင်သူငယ်ချင်းများအတွက်? စီစဉ်ထားကြဖို့ဒီနေရာလို့မရတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းဖို့များအတွက်ဘီယာ၊ဖၚျပသည္သို့မဟုတ်အခြားပျော်စရာအစီအစဉ်? ကိုရိုက်ထည့်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အများကြီးသူတို့စားစရာ၊စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ရယ်စရာလူတို့တွင်အ၎င်း၏မြို့။ ပူးပေါင်းချက်တင်နှင့်ပျော်စရာရှိသည်။ သင်ယခုသင်အနားယူသို့မဟုတ်ဖြေလျော့ထံမှအလွန်ပျင်းစရာအလုပ်သင်ကြဘူး? ကောင်းစွာ၊ဒီအယူအချိန်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းဖို့အထူး။ ထဲကို ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးဒီချက်တင်၊အခုတွင်ထည့်သွင်း ။ ဒီနေရာမှာသင်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်၏မျက်နှာကို၏၊အရေး၊သူ့ကိုစေလွှတ်မည်ရှိသမျှဖိုင်တွေကိုမျှဝေချင်၊နားထောင်ဖို့သူ့အသံ။ သင်ချင်တယ်မှတ်ပုံတင်ရန်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်? တက်လက်မှတ်ထိုးယခုဒီအားသာချက်နဲ့အများကြီးပို။
မြောက်ပိုင်းဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းလေသည်အံ့သြဖွယ်တိုင်းပြည်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အဘယ်မှာသင်သည်တတ်နိုင်အခုအချိန်မှာအပါအဝင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်ဒိန္းအွန်လိုင်း။ ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဗြိတိန်ကိုဥရောပပည္နယ္လုံခေါ်ပုလဲ၊၏သင်္ကေတအဖြစ်ရှားပါးလှသည်။ ရှုခင်းဥယျာဉ်များစနစ်တကျလမ်းအများကြီးဖျော်ဖြေဆွဲဆောင်မှု-ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနှင့်အံ့ဩခြင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံ၏။ ကျနော်တို့တက်ထားတဲ့ကင္မရာ၏မြို့တော်အတွက်နိုင်ငံတော်၏ပိုင်နက်အပေါ်အဟောင်းများကိုနိုင်ငံတော်အတွက်၊ထို့ကြောင့်သင်အမြဲခံရ၏ဗဟိုအတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏တစ်နိုင်ငံလုံး။ ဂင်ပေါ်တည်ရှိပါသည်တဲ့အသုံးနိုင်ငံအသီးသန့်အမျိုးအစားများဒီကင္မရာမွာအားထိုက်၏သင့်ရဲ့ကြည့်ရှု။ နိုင်ငံ၏အကျော်ကြားသည်၎င်း၏ ရှုခင်းများ၊ယူနန်သဘာဝနှင့်ဈေးကမ်းခြေ။ ဤသည်အသေးစားပြည်နယ်နှင့်အတူတစ်ဦးရှေးဟောငျးနှင့်ကြွယ်ဝသောသမိုင်း၊အကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များ။ အရာအားလုံးဒီပုံကနေတစ်နတ်သမီးပုံပြင်ပုံပြင်- ကျေးရွာ၊အဝိုင်းအားဖြင့်သစ်တောနှင့်ရှေးဟောင်းရဲတိုက်၊အသွင်အပြင်ဖြစ်နိုငျသောခံစားအမြဲလက်နှင့်အတူအစွန်းရောက်-ခေတ်မီတဲ့အဆောက်အဦ။ နှုန်းအလှအပ၏ဤထူးခြားသောနေရာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင်ပြေသောဝန်ဆောင်မှု။
နှင့်ဘဝအတွက်တောင်အနည်းငယ်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်ရွာ)၏အမြင့်ရွာပြီးနှင်းအဖြစ်၊ထိုအရပ်၌ကွယ်ပျောက်သွားလျှင်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌)မျိုးဆက်တစ်ဦးအားကြီးသောအငြင်းအခုံဖြစ်ကမ်းလှမ်း။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်:ကိုယ့်ငါ့မိတ်ဆွေ၊အဓိကဆွစ်ဇာလန်၊စသည်တို့ကို။ သူမဘဝအတွက်တောင်အနည်းငယ်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်ရွာ)၏အမြင့်သူ၏ရွာနှင့်နှင်းအဖြစ်၊ဆိုက်ဘေးရီးယားရှိ၊လျှင်သင်သွားအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌)မျိုးဆက်တစ်ဦးအားကြီးသောအငြင်းအခုံဖြစ်သောကမ်းလှမ်း။ မလာကြလျှင်လက်ခံရရှိအီးမေးလ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို၊အားကၽြန္ဳပ္ထံေပးပုိအီးမေးလ်လိပ်စာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီး၊နှင့်ဖော်ပြပါလိပ်စာမှသင်ဖန်တီးရန်သင့်အကောင့်ကို၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စာသင်ရှိစေခြင်းငှါလက်မှတ်ရေးထိုးသို့မဟုတ်လက်မှတ်ရေးထိုးညံ့ဖျင်း။ ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်သင့်အကောင့်ကိုအရေအတွက်
ဒီနေရာမှာရဲ့အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုအမည္တူရွာ၍သူမ၏ကိုယ္ေသောခြွင်းချက်အတွက်လိင်စိတ်။ တူစံသို့မဟုတ်အနည်းငယ်ဖြောင့်ဖွင့်အရေးအသား၊ရှိခြင်းတူသောကင်ဆာရောဂါအင၊တော်တော်မျက်နှာ၊အနုပညာ၊၉၀ ကိစ္စများ၊အတု။ လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံး၊သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာမယ့်။
ဝယ်တိုက်ရိုက်အတုအရေအဆွစ်မြို့ကြီးသင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါလင့်"ဝယ်"အကူအညီတောင်းပြီးစမ်းသပ်ဆိုက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ အကောင်းဟောငျးအားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏နိုင်ငံအများအပြားပေါ် ရွေးချယ်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖွံ့ဖြိုးရေး။ အဓိကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရုံးနှင့်စျေးဝယ်စင်တာများအတွက်ဤနိုင်ငံ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအသားအနှုန်းနှင့်သုံးစွဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအစစ်နီးနီးပါ။ အတည်ငြိမ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစီးပွားရေး၊ဥပဒေရေးရာမူဘောင်နှင့်အမရှိခြင်းငွေကြေးဖောင်းပွမှုခွင့်ပြုခဲ့ကြပါပြီ-ဆွစ်ဇာလန်အားကစားအတွင်းဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွား။ စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများ၏အရေအတွက်ကိုရှင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျိုးစီးနယ်မြေအတွက်ဒီအတွက်ယင်းပြည်နယ်၊သေချာအောင်သင်ပေးဆွစ်ဇာလန်ဖုန္းနံပါတ္မ်ား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၏သားသမီးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့လေ့လာမှုအတွက်ကောင်းစွာလူသိများဆွစ်ဇာလန်ဘော်ဒါကျောင်းများနှင့်ဆည်းပူးမြတ်သောအသိပညာ? ဝယ်တိုက်ရိုက်ဆွစ်ဇာလန်ဆာင္ရြက္ရန္မွာ မိုဘိုင်းဖုန်းများသူတို့အဘို့။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်သာတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဘဏ္၊ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီ၊ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ကြီးစွာသောနေရာ။ အလွန် ၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအားလပ်ရက်များအတွက်ဤနိုင်ငံအကြီးအဖြစ်လိမ့်မည်။ နှင့်နေမှချိတ်ဆက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အလုပ်ဖော်အသုံးပြုပါ၊ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်အသွင် တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရေအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအာမခံတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်၊ပြည့်စုံကိုယ်ရေးအဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏။ သုံးစွဲဖို့ညွှန်ကြားနံပါတ်များအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့တည်ရှိ၏ပိုင်နက်အပေါ်အဆွစ်။ သင်အသက်ရှင်နိုင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလောကအတွက်-အားလုံးအတွက်လစဉ်ကြေးပေး။၊သင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဤအတွက်ယင်းနိုင်ငံ။
ဘျ၏အွန်လိုင်းတစ်ခုကိုပူဇော်ကြလိမ့်မည်အံ့သြဖွယ်အမြင်များ၏သဘာဝ၊အတောင်တို့၏အဲလ်ပ်တောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူနှင်းများ၊သူတို့နှင့်အတူအသန့်ရှင်းဆုံးလေထုနှင့်ပြိုးပြိုးပြက်ဖြူနှင်း။ ကြိုးစားကြည့်ဖို့ရေကန်ကြီးများနှင့်အသေးစား၊အဘယ်မှာရှိခရီးရေနှင်းလျှောစီးသို့မဟုတ်သွားလာအပေါ်ရေနေစဉ်ရွက်၊ သို့မဟုတ်။ တခါတရံမှာသင်မြင်ဆွဲထား သို့မဟုတ် အတွက်၊တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပျြောအရမ်းလူကြိုက်များကြောင်းဤအရပ်တွင်။ ကျေးလက်ဒေသတွင်၊အသေးစားနှင့်မြို့ကြီးအသီးအသီးရှိသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အရသာ။ အပေါများကြွယ်ဝနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ၏အဆောက်အဦးအပြင်ပရိဘောဂဖမ်းယူလိမ့်မည်ဟုသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အစမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်တီးလူ့လက်ကို။ ဆြစ္ဇာ ဒါဟာအကောင်းဆုံးလူသိများ၎င်းနာရီအမှတ်အသားနဲ့ချောကလက်။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု၏အဆွစ်ဇာလန်ကမ်ကိုပရဒိသုအဘို့အစောင့်စျေးဝယ်။ အများအပြားရှိပါတယ်ဇိမ်ခံဆိုင်များ၊ကြီးမားသောစတိုးဆိုင်များ၊အရောင်စုံ၊အသေးစားကုပ်နှင့်ခေတ်မှီကိုစ။ ဒါပေမဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးမွေ့လျော်ကြလိမ့်မည်အဟောင်းရဲတိုက်နှင့် ။ သာရကျိုးနပ်သည်မြင်လျှင်၊အကြီးဘုန်းကြီးကျောင်း၏။ ၊ဘယ်မှာသူတို့နေဆဲလွှဲတော်ကိုကယ်ဖို့ပြိုလဲ။ ဟွန်လ၊သာဗမာ၊စအဖြစ်လူသိများ လေဆိပ်:စီးပွားလေဆိပ်တွင်တည်ရှိသည်တုံ၏၊ဆြစ္ဇာ။ ကမ်နှင့်အတူအဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံအဆောက်အဦ၏အဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင်။ တက္ကသိုလ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအလယ်၌ရာစုနှင့်စဉ်းစားသည်နိုင်ငံ၏အကြီးတက္ကသိုလ်၊အရာလည်းပါဝင်၏စာရင်းထဲတွင်အကောင်းဆုံးကျောင်းများအတွက်။ နယ်မြေအဖွဲ့အစည်းကဝိုင်း ပန်းခြံနှင့်ဥယျာဉ်။ အများစုမှာမျှော်လင့်ထားတဲ့ဇာတ်ကောင်အတွက်သမိုင်းရှိပါတယ်။ နှင့် အကျောက်စိမ်းမှဆုံးဖြတ်ရာ ငြင်းခုံနဲ့နောက်ဆုံးသူထွက်ရှာတာအကောင်းဆုံးတိုက်လေယာဉ်အတွက်ပေါ့ပါးတဲ့အမျိုးအစား။ ဒါဟာမသာအများအတွက်ရန်ပွဲအစစ်အမှန်အားကစားဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များ၏အသား၊အဘယ်မှာရှိတစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းသားများ၏တိုက်ခိုက်နေခဲ့သည်မိမိဂုဏ်။ ကိုရီးယားဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းဟာလူအတွက်ဆွစ်ဇာလန်ခရီး"ရုရှားအဝေးပြေးလမ်း"။ ဆွစ်ဇာလန်ခရီးရောက်ရှိသာအာေယခုဖင့္အထူးလေ့လာရေး။ သူများလာပြီးနောက်တပ်မတော်မှရပါလိမ့်မယ်သွားရန်တဲလ်သည်အားလုံးအဆင့်ဆင့်၏အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို။ ငြပြသတဲ့အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်းနှင့်အတူလန်ရဲ့ ၊အရာစတင်တည်ထောင်ခဲ့၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင် ၂၀ ရာစုအစ။ ထို့နောက်မှီ၊ဒီဧရိယာဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်တိုက္ခိုက္။ ထိုဗျူဟာမြောက်အရေးလမ်းကြောင်း ။"တစ်ရာစု၊ဒီလမ္းဆောင်ခဲ့တော်မူပြီဖြူကျောက်ခေတ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကရင်။
ဥရောပမြောက်ပိုင်းရှိအသေးစားဒိန္း၊မတရားတရား၏အာရုံစိုက်ဧက၊အဘယ်သူကိုအများစုနှစ်သက်ရေပန်းစားခရီးသွားဧနှင့်လမ်းကြောင်း၊နှင့်အလွန်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်။ ဒီသေးငယ်တဲ့ဧရိယာ၏မြောက်ဘက်မြေကြွားကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်မှု၏စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေ၊စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အံ့မခန်းရှုခင်း။ သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဒီအသေးငယ်ပေမယ့်အလွန် နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နိုင်ငံတော်ကိုအနိုင်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေရာသီ၊အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးရှိဖျော်ဖြေရေးများများအတွက်မည်သည့်အရသာနှင့်ဘတ်ဂျက်။ အသီးအသီးဒိန္းနဲ့ဆက်စပ်တစ်ခုခုမိမိအဟောင်းခြံနှင့်ရဲတိုက်၊အလွ ၊ရေကန်နှင့်အိုင်များ၊နတ်သမီးပုံပြင်အခရစ်ယာန် ၊အဘယ်သူ၏နေအိမ်ဖြစ်ပါသည်၊နာမည်ကြီးအပန်းဖြေပန်းခြံ၊သို့မဟုတ်အလွချော်နှင့်အတူ၊သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးစနစ်များနှင့်ဖော်ရွေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျနော်တို့ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်းထိပ်တန်းတကျိပ်အကြောင်းရင်းကိုသွားဒိန္း။ ကြည့်ကြရအောင်သူတို့ကိုအနီးကပ်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ၊ထိုသို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်ထမ်းဘိုးကိုရှာနှင့်အလိုဆန္ဒနှင့်လှပသောဆက်ဆံရေး? အစြန္းအပျော့ပျောင်းသော။ ဆွစ်ဇာလန်နှင့်ဂျာမန်ဆို၏ထမ်းဘိုးသူတို့ကဖော်ရွေမှု၊ပွင့်လင်း၊သဘာဝအလှနှင့်ထူးခြားသောသဘောမျိုးအများကြီးမိသားစုဆက်ဆံရေး။ အစြန္းသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားရန်၊လွန်း?"ကျွန်တော်ကိုယ်စားပြုအမျိုးသမီးများစွာတွင်ပိုလန်ကနေရှာသည်မိတ်ဖက်နှင့်ယောက်ျားမှဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအလိုကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ အချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုလန်အမျိုးသမီးသားအတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်ဘန်း၊ဘေ၊ဗာနှင့်ပြင်သစ်။ သို့သော်၊အများဆုံးအမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်လန်၌အသက်ရှင်။ သို့သော်၊သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်ကိုသူလိုလိုလားလားစွန့်ခွာဖို့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်နှင့်သင်ယူဘာသာစကားအတွက်ကြီးမြတ်သောမေတ္တာ။ ဒါကြောင့်၊ပိုလန်အမျိုးသမီးအသက်ရှင်သောသူတို့၏အီတလီ-ပိုလန်အတူဆက်ဆံရေးရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့အလွဘွဲ့? အနိုင်ရသင်၏မယားကိုပိုလန်ကနေကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်ပိုလန်သည်အသင်တို့အဘို့ပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုရန်ပိုလန်အကျိုးစီးပွားအတွက်သင်ပိုလန်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆြစ္ဇာသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌ တက်ပုံတောင်နှင့်နွေးထွေးနှင်းများ၊ဘဏ်များ၊ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်တိကျမှန်ကန်နာရီ၊ထင်ရသောရေမဒိ၊ရွှေကျင်နှင့်သန့်စင်ပြီးချောကလက်။ အဆိုပါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သဘာဝအလျောက်အခြေအနေများဤနိုင်ငံညား၊တောင်ရေကန်၊မြေသြဇာကောင်းသောချိုင့်ဝှမ်းနှင့်တချိန်တည်းမှာပင်အံ့သြဖွယ်များနှင့်အံ့သြဖွယ်ရေခဲမြစ်များအရည်ပျော်ဒီနေရာမှာနှင့်အတူနွေးထွေးမှုနှင့်ဧည့်ဝတ်ပြု၊အသက္ေလိမ့်မည်အလျင်အမြန်ရန်အသုံးပြုရပြီးနောင်တ။ ဤသည်အမှန်တကယ်အဟောင်းဥရောပတိုက်၊ဒါကြောင့်အညီအမျှဆွဲဆောင်မှုနှစ်ဦးစလုံးအပန်းဖြေများအတွက်နေထိုင်။ ရဲတိုက်များ၊ကျေးရွာများနှင့်လမ်းများအတူတကွဒီနေရာမှာနှင့်အတူခေတ်မီအဆောက်အအုံပေးခြင်း၊မြို့အထူးဖင္။ ဒါဟာအဘို့အဆန်းမဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီး၏အိပ်မက်လက်ထပ်ဆွစ်ဇာလန်အမျိုးသမီး။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်အရင်တိုင်းပြည်အဘယ်သူနည်းဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများဖြည့်ဆည်းမြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းခက်ခဲသောအောင်မြင်ရန်။ အံ့သြစရာမဟုတ်တစ်စီးရီးများအစည်းအဝေးနှင့်အတူအမျိုးသားများထံမှဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများအတွက်အိမ်ထောင်နှင့်မိသားစုသည်အိပ်မက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတော်များများအရာက္ဖိုကြသူ၏မိသားစု၏မတည်မငြိမ်ပြည်နယ်နှင့်အိပ်မက်၏။ လျှင်သင်ရွေးချယ်ဖို့ကြိုးစားပါ၊အသုံးအဓိကသော့ချက်စကားများအတွက်နားလည်ဤပြည်၊သူတို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊တိကျမှုနှင့်ဘက်မလိုက်။ နောက်တဖန်အ၊အကျိုးကိုအဖြစ်အဘို့အရန်သင့်ကတိကဝတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသန့်ရှင်းမှု၊သင်သတိပြုမိနိုင်သည်ခပ်သိမ်းသောအလှည့်မှာ၊အပါအဝင်သန့်ရှင်းရေးအလမ်းများ၊မဖော်ပြထားခြင်း။ ဒီနေရာမှာအရာအားလုံးနေသူများကဖန်တီးဖို့လုပ်လူတိုင်းသက်သာခံစားရ၊ပင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းသူတို့မှလွှဲသွားမည်အသုံးပြုခြင်းပင်မြင့်မားသောအဆင့်အရာရှိ။ ကျန်းမာသောပတ်ဝန်းကျင်၊အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ပညာရေးနှင့်လူမှုစနစ်တီထွင်ခဲ့သည်နှစ်ကျော်ကြသည်မှာရည်ရွယ်ကာကွယ်လူများနှင့်၎င်းတို့၏ကောင်းစွာ-ဖြစ်လျက်ရှိ။ မီစီစဉ်လက်ထပ်ဖို့အဆွစ်လူ၊ဒါကြောင့်လေ့လာသင်ယူရကျိုးနပ်သည်အကြောင်းကိုပိုမိုထူးချွန်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဤစိုက်ပျိုးနှင့်ကာကွယ်ဥရောပနယ္။ မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာသည်လူတို့တွင်အလွန်ရှေးရိုးစွဲ၊ သူတို့ကအစဉ်အလာတန်ဖိုးနှင့်အလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့။ အကောင်းဆုံးအဖော်များအတွက်သူတို့လိမ့်မည်အဖြစ်အမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်မိသားစု၊အိမ်နှင့်သားသမီးများမှာလည်းအခြေခံတန်ဖိုးများ။ ဤအမှု၌၊အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေအလက်ထပ်ဖို့ဆွစ်ဇာလန်အမျိုးသမီးနှင့်အိပ်မက်များအဆင်ပြေ၊ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်နွေးထွေးသောမိသားစုအသိုက်။ ခေတ်သစ်ရုရှားအမျိုးသမီးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ကြီးစွာသောအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ဖြစ်လာရွေးချယ်တင်မြှောက်နေထိုင်၏၊သူတို့ကတက်ကြွနေကြသည်၊ဒါပေမဲ့သူတို့ပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖန်တီးသောမိသားစုထက်အပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါ။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်မျှဝေဖို့သင်၏နွေးထွေးမှုနှင့်လို၏စောင့်ရှောက်မှုယူသင့်ခင်ပွန်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာအားသာဥရောပတိုက်တွင်၊ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာအနှံ့၊သငျသညျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှု။ တွေ့လျှင်လျှင်သင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်၊သင်အလွန်ကံကောင်းသောကြောင့်၊ဤတိုင်းပြည်တွင်သင်ဝိုင်းအားဖြင့်နွေးထွေးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၊ပဲကဲ့သို့သင်၏ခင်ပွန်းနှင့်ပြည်နယ်။ လက်ထပ်ဖို့အဆွစ်လူကိုရဖို့ဘဏ္ဍာရေးချမ်းသာကြွယ်နှင့်ယုံကြည်အနာဂတ်မှာ။ ဗာဆိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမင်္ဂလာဆောင်အေဂျင်စီ"ဖိတ်ခေါ်ဖို့သင်စပိန်အတွက်အုပ်စုကိုခရီးအနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့။
အဲဒီမီပေါ်လာအ:တင့်တယ်၊မိန်းကလေးတစ်ဦး၊အရာအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောသင်၏အမျိုးအစား။ သင်၏လျှာကို-အချည်၊ထစ်၊မျက်နှာရႊေစ်းထူးဆန်းစိတ်ခံစားမှု၊နှင့်အ ရှာဖွေနေသည်ဤမျက်မှောက်နဲ့မရနိုင်ပါအဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်သင်ရုံကြောနှင့်မကြောက်သူမ၏? ဤအခြေအနေဖြစ်လာမှာချက်တင်အပေါင်းတို့သည်အချိန်၊သို့သော်ထိုပြဿနာ၏နှင့်သင်ကတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ပြင်ဆင်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသောအားဖြင့်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်လွယ်ကူသည်ရအကျွမ်းနှင့်အတူလှပသောမိန်းကလေး။ ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်၊အေးဆေးတည်ငြိမ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သိမ်း။ ပြမူရင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်အခြားယောက်ျားတွေ။ အကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်အသွင်အပြင်-ဝက်ခြံမျက်နှာပေါ်မှာသို့မဟုတ်ဆံပင်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ် အ ပြီးပထမစက္ကန့်များ၏ဆက်သွယ်ရေး။
စနေနေ့မှစ၍စနေနေ့။ နာရီ၊ဒါကြောင့်ဒီက။ အဆိုပါ အစည်းအဝေး! ။ အလှည့်အတူတူအလွန်ကြီးစွာသောဝယ္တဲ့အစည်းအဝေး၊အကြီးဆုံးဥရောပ လွတ်လပ်တဲ့လူမှုအသိုင်းအဝယ္တဲ့ယာဉ်မောင်းနှင့်။ အထိ။ ရွးကားများနှင့်များပြားလှသောရွးပရိသတ်နှင့်ပရိသတ်လာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါသောအဖြစ်အပျက်မှာ သာ သာ ။ အဘို့တစ်မူထူးခြားသောရင်ဆိုင်နှင့်အတူလက်ရှိသမိုင်းနှင့်အလွန်အထူးအဝယ္တဲ့ေမာ္ဒယ္၊အတွေ့အကြုံနှင့်အတူနောက်တဖန်သင်တို့ကိုဤနှစ်သစ်ကူး။ တွင်တည်ရှိ၏စိတ်ဝင်စားစရာတည္ေနရာ(စလောက်မှမိုးရွာရွာကနေကာကွယ်)၊အပြည့်အဝ၏ယဉ်ကျေးမှု၊အကောင်းနဲ့အညီသာက္ခ်က္ၿနှင့်အတူအယူအဆ၊ေရွးရှင်၏ဂုဏ်သူများကဖန်တီးသောသူ"ဝယ္တဲ့ဒဏ္ဍာရီ"နှင့်၏သင်တန်းဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်ပြောပြပါ။ ကျနော်တို့မျှော်ကြည့်ရှုဖို့သွက်ခုံနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဆွေးနွေးမှုများ(ဖွေရန်အတွက်အစီအစဉ်၊ကြားခံနှင့်ပြခန်းအတွင်း)။ အမြဲအဖြစ်၊ရှိလိမ့်မည်လည်းတစ်ဦးလှပယှဉ်ပြိုင်မှု၊အ ၊စိတ်ဝင်စားဖို့မိတ်ဖက်-င္ျ၊အများအပြားထင်-နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များ၏ဝယ္တဲ့မှအသက်အကြီးဆုံးမှအသစ်။ ကဓါတ်ဆီအတွက်အလွန်"ရာက္ရွိလာလွဲ"လေထုထဲတွင်ပါ! မှတ်ချက်:ဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တက်ရောက်ရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမ မေးခွန်းတွေနဲ့အကိုအတွက်ပါဝင်တက်ရောက်ကြသည်မဟုတ်လိုအပ်သည်။ မပိုမာင္းတိတ် နှင့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူသူလူအထင်ဒါဟာပျော်စရာင့်! နယူးဌာန:အဆောက်အဦးအပြင်က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအရေးနဲ့လှပတဲ့အပြောင်းအတွက်ဒီတစ်နှစ်ရဲ့နိဒါန်း အဆောက်အဦးအပြင်က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား။ အဝင်ပေါက်တယ်၊ပြီးတော့ကိုကြီးစွာသောဖြစ်လိမ့်မည်နေရာထိုင်ဖို့၊လူမှုရေး၊အစာစားပြီးသောက်ပါ။ အပြင်မြောက်မြားစွာထမင္းစားေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ကြီးမားတဲ့ဘား-လံႈေတည်ဆောက်ခဲ့။ တစ်ခုလုံးကိုဧရိယာဖုံးလွှမ်းနှင့်အတူတဲကြီးမားတဲ့ထီး။ ဒီဘက်ပါ၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၊ညာဘက်သို့နှလုံး၏အစည်းအဝေး၊ပြုမူတန်နားထောင်နှင့်အတူတောင့်သက်သာခံစားမိသူလူအထင်သူတို့အတူတူဖြစ်ကြောင်း။ အ ပေစများအတွက်စီစဉ်စနေနေ့ညနေအများပြည်သူကြည့်ရှုခြင်း၊စားသောက်ဆိုင်အတွင်း၊အင်းအစားအစာတံခါး၊မြေပုံပေါ်တွင်(လက်ဝဲ)။ ဂိမ်းဆန့်ကျင်သည်ဂျာမနီက၊ဆွီဒင်။
ပဌမ၊သငျသညျအဘယျသို့လိုအပ်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ထဲမှာ၊မြို့ကြီးစွာသောအားလပ်ရက်အပန်းဖြေ။ ကြားရက်လုံးအတွက်အတွက်ကျိန်းသေတစ်ဦးတောင်းဆို ကြာ သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမှတက်ဝတ်စုံသို့မဟုတ် နာရီအဘို့၊ဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့ လုံးဝလက်မခံ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊ဧည့်နိုင်ငွားမည့္မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ငြေခ်သို့မဟုတ်အတုံးစကိတ်ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ဒီတော့ဟောပြောလျှင်။ ဒါ့အပြင်၊၏အမှုအတွက်သင်တန်းတစ်ခု၊ထိုင်ပေါ်သတင်းစာခုံပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးအမိုးအကျယ်ထွဋ်နှင့်ဖြတ်သန်း၏လုံလောက်သောအရေအမျိုးသမီးႏွယူနစ်အချိန်သည်အကောင်းဆုံးအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များ။ သို့သော်၊အခါ ကြည့်ပိုင္ဆိုင္လို၊နှောင့်နှေးတုံးစကိတ်နှင့်မမျှော်ဖတ်ကြုတ်၏လှပမင်းသမီး။ တစ်ချိန်ကသင်ပိုင်ရှင်တွေနှင့်အတူကစားနေစဉ်တစ်စီးပြီးနောက်၊တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းဆိုင်ကယ်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ။ ထားငါ့မျက်စိနှင့်အတူတကွလက်များအတွက်။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အုပ်စုများအကြောင်းအထူးအာရုံစိုက်။ ၏အရေအတွက်မိန်းကလေးများကြီးမှာအချိုးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ထိုသူတို့အပေမဲ့လည်းသိသိသာသာမြင့်မားခြင်း၊အသုံးပြု၏ဘာသာစကားအားဖြင့်သောသူတို့ဆက်သွယ်ပြောဆို။ လုံးသိတဲ့အတိုင်း၊ယောကျာ်းအင်္ဂါများ၊အထူးသဖြင့်အနည်းဆုံးတဦးအတွက်သူတို့ရဲ့လက်နက်တိုက် နိုင်ငံခြားဘာသာစကား၊လေပိုကောင်းလေဗမာအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်များ၏စိတျနှလုံးအများနှင့်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ။ အခေါ်အဝေါ်"သွားကွင်းဆက်"ပြည်နယ်အတွင်းဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းသည်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်သန့်ရှင်းသောရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်တူတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်:မဂၤလာပါ၊တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုမိန်းကလေးလို့မရနှင့်တွေ့ဆုံသင်အငြိမ့်အတွက်ဤမြို့။"ဟေး၊"ငါကလည်း။"ဟေး၊"ငါကလည်း။ အနီးဆုံးပါတီကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပင်ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးမင်းသမီး။ သွား၏စုံတွဲတစ်တွဲကနေတဆင့်လော့ခ်အကြောင်းကြောင့်မှန်ကန်သောအတွက်ချက်။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ"အနှုတ်"အပေါင်းတို့နှင့်၎င်း၏ဝှက်ထားသောအဓိပ္ပါယ်၊ပြပွဲနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးအထင်လျှင်ပင်၊ဒါကြောင့်အလြန္အ။ အောင်မြင်-"ယနေ့သည်ကောင်းစွာအလိုက်-နက်ဖြန်အပြီးနောက်နေ့မနက်ဖြန်"။ ငါနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ခေတ်သစ်ဂီတနှင့်ကျွန်တော်စကားလုံး။ -ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစတင်နံနက်ဒီအလုပ္။ အပေါ်ကျန်ကြွင်းသောအရာမှငါမွငျနိုငျသော၊ငါအသားကင်။ များစွာသောအခြားဒေသများတွင်လူ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်သောအသက်တာပိုမိုလွယ်ကူများအတွက်လက်ထပ်စုံတွဲများနှင့်အအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်(ပေါင်းစပ်နှင့်အတူအားလပ်ရက်ဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန္း၊နက်ရှိုင်းတဲ့လေ့လာမှုပုံမှန်အခြေအနေ၊စွမ်းရည် တုံ့ပြန်ထွင်ဖို့အံ့သြဖွယ်သည်၊အသက်ရှင်သောအတွက်အကောင်၏အခွံ။ ဒီမှာ၊ဥပမာအားဖြင့်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသာအမြင်များ၏ဝန်းကျင်အစအဦးမှာ)ခန့်လေဆိပ်ကို၊နောက်ပိုင်းကြပျံများတစ်ပင်လယ်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအဓိကမြို့ကြီးများ၏အပူ၊အရာနားလည်ရန်ခက်ခဲသည်၊ဒါပေမယ့်ပင်လျှင်ဆုံးရှုံးရပြီအဘယျသို့ဖြစ်ပျက်၊သငျသညျလျောက်ပတ်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ကောက်အ ၂ မြေပုံကျပန်း၊ပင်ဤပထမဦးဆုံးကြီးမားတဦး(သည်ပြုံးရယ်)။ အခြားဥပမာသတိထားပြင်ဆင်မှုအတွက်ကြိုတင်စဉ်းစားဤအမေဇုံပေါ့ပေါ့ဦးတည်ဖို့အတိုချုပ်ဘားတနန္းဒါ့ကြောင့်အပင္ၾသင်ဂရုတစိုက်ချစ်ကခွေးအစားအစာအိတ်များကိုစစ်တိုက်ခြင်းမှဂီယာ။ အမှု၌သင်တို့ကိုအချိန်အများကြီးရှိသည်၊သင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်သင့်ရဲ့အားသာချက်ဖို့။ မမေ့မလြော့ပါဒါကြောင့်လည်းထူးဆန်းသောဤဂိမ်းတစ်ခုအားကစားရန်ကိုအနု။ ဘယ်လိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမျိုး၏လူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့၊ဒါပေမယ့်အပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်အဆုံးသတ်။ အများဆုံးလူမျိုးများမှာပင်းတယမိုးနှင့်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်ဖို့ကိုယ့်လွင်ပြင်ဒါပေမဲ့အခုအဆက္အသြယ္၏အများဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်၊ဒီလယ်သမားပြေးရဘဲ ချီးမွမ်း။ ကျွန်မအထင်ဒါဟာတစ်ကြိုးစား၊လျှင်မတား။ -အချိန်သည်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကိုလတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်ကြွက်သားသို့မဟုတ်ဂိမ်းရထား။ ဒီစခဲ၏ဖန်တီးမှုမှတစ်စိန်ခေါ်မှုမုဆိုးအဖြစ်အသစ်။ ကောင်းသောအရာတစုံတခုသင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါကြောင်းတည်းသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏သင့်ရဲ့ခွေးကိုရဲ့အစားအစာ။ အ ။ ကျွန်တော်တို့တွေအသေးစားခွေး။ ဤစကားလုံးသည်:"မင်္ဂလာပါ။ ဘာအအေးဆုံးတီမြို့အဘယျသို့ထွက်ရှာတွေ့ဖို့ပင်ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးမင်းသမီးကဲ့သို့ကြည့်ရှု။"အသံလုပ်ခဲ့နုံ။ ဤသဒ္ဒါဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ငါ့ဂူဘာသာပြန်)။) အပေါ်မတ်လ ၁၊၂၀၁၉၊အခြေအနေကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်။ ခြားနားချက်မှာဘွဲ့မည်မဟုတ်။ ဤသည်အသေအဆုံး။ အပိုင်း-လြတ္လပ္ေရး၊ဒီဆီ-ဒီကျပန်းရှုပ်ထွေး၊ဒါပေမဲ့အထိသူတို့ကအရမ်းမကောင်းဖြစ်စေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတိုင်းသည်ပြီးသားအသုံးပြု။ မင်္ဂလာပါလူတိုင်း၊အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီသည်အဘယ်သူ၏တိုင်းပြည်လူဦးအတွက်စိတ်ဝင်စားကြ-အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင္ဗ်ာ:ဘာစီလိုနာ
ယံအသက်အဘို့အကောင်းဆုံးအခိုက်သင့်အသက်တာ၏။ ဒီမှာတွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရိုးရှင်းသင်၏အသက်တာနှင့်အတူ၊အများကြီးပျော်စရာ၊ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းန်ဆောင်မှုကိုခြီးမွှောကျ။ အားလုံးဒေသများ၏အသက်တာနှင့်အတူအချိန်အများကြီး။ ငါဆြ။ ငါအသက်ရှင်။ အသက်တာကိုအသက်ရှင်သင်အမြဲလိုခငျြတော့! ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူထူးခြားတဲ့အသစ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်။ ပိုပြီးအောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်စရာဘဝမှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်အသိပညာ၊သောဖြစ်ရပ်များနှင့်အသိပညာအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံ။ သင်ပင်အတွေ့အကြုံသင်အရာအားလုံးကိုမြင်။
။ -ကက်၏ကမ္ဘာ့ရုပ်မြင်သံကြားချန်နယ်။ ငါတို့သည်ကိုပူဇော်ကြီးမားတဲ့စာရင်းကမ္ဘာ၏အရွ္၏မိသားစုချန်နယ်၊အနီးနှင့်ဝေးပြည်ပမှာ။ အွန်လိုင်းများချန်နယ်ကောက်ခံလူကြိုက်အများဆုံးရုပ်သံချန်နယ်နှင့်အွန်လိုင်းချန်နယ်၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစား:ဂီတ၊လူမႈ၊အားကစားဆိုင်ရာ၊သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးရုပ်သံလိုင်းကလေးများအတွက်၊အဖြစ်များစွာသောအခြားလူကြိုက်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသစ္ျဖစ္ပါနှင့်အတူသစ်ကိုချန်နယ်။ စောင့်ကြည့်ရေးအရွ္မိသားစုအွန်လိုင်းအင်တာနက်ကနေတဆင့်။
ဖြစ်လာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလွန်ကြီးစွာသောအဖြစ်အပျက်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဖွင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းတစ်ဦး"အများဆုံးအိုကေ"၊အရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊ဗီစီးရီး၊သီချင်း၊ပြပွဲ၊လွှင့်၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ဘလော့ဂ်များအနှစ်နှစ်ဆယ်၊မဲသင်အကြိုက်ဆုံးစီမံကိန်းအတွက်အသီးအသီးအမျိုးအစား၊နှင့်သင်၏ပျက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သီးသန့်တံဆိပ်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်တွေ့မြင်ခဲ့သောဤအချက်ကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်ပါဝင်မဲနေ့တိုင်းအထိဒီဇင်ဘာဆယ်အပိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်သူတို့အဖို့သူများကိုဆု၊ သူကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျသဖြင့်၊သင်တို့အဘို့အကြီးမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းအနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုအဖွဲ့ချုပ်သူကကစားအဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့ကလပ်သူသည်ပြဇာတ်အရေးမပါဘူးအသက်ဘယ်လောက်နွေရာသီမှတ်တမ်းများကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆက်လက်။
န နယ်မြေ၊ ၂၆၀၂၊အဲဒီအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလူ။။။။။ ကျွန်တော်ကသာမန်မိန်းကလေး၊ပိုပြီးနောက်ကွာရှင်း။ ငါသည်တဆိခဲ့သည့်အ။ အဘို့အရှာနေအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးဂန္မိသားစု။ ငါချစ်လူအပေါင်းတို့သည်ငါ့အသက်ကို။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါရေးထား ၁၂၈၅၈၄ ပါ ။ ငါဖြစ်တဲ့ ၆-နှစ်အရွယ်သားကို။ ငါ့နာမကို ၁၂၈၅၂၄ ငါအများကြီးရှိသည်။ ငါတစ်ဦးမိသားစုရှိသည်နှင့်အိပ်မက်ရယ်ကျွန်မထင်ပါတယ်လူငယ်တစ်ဦးအမေနှင့်ကျွန်တော်လုပ်နေခဲ့တာအချို့သောအားကစားအကျော် ၁၈ အသက်အနှစ်။ အဆိုပါအိမ်ထောင်ပြုမယူမှုကြောင့်ရာအရပ်ကို စိတ်ကျရောဂါ၏။ အမျိုးသားများအဘို့ရှာဖွေနေအလုပ်အသက္ ၂၈ႏ၂၃၊ကွာရှင်းစတုတ္ထတန်းကျောင်းနှင့်မေတ္တာအကြောင်းစဉ်းစားသစ်ကိုမိခင်များ၊အားကစားနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလာသဘာဝကျကျမှသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကို။ သွားပန်းခြံနှင့်ရရန်အပြည့်အဝကြည့်ရှု။ ငါအေးအေးဆေးဆေးနှင့်စနစ်တကျလူတစ်ဦး။ နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ချိုမြိန်၊အပြစ်မရှိသောကြောင့်၊ဒါကြောင့်အားလုံးအတူတကွကြွလာ။ အမှု၌ရယ်မောမှုဖြင့်မျက်ရည်၊ဒီအရာတစ်ခုခုသည်လည်။ သိပ်လှလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ပေါ်တွင်၊ ၂၆၀၂၊အလေးအနက်ချိတ်ဆက်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လူ့အလားအလာ။
သည်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းဇယားများအရ၊ထက်ပို။၈၅ သုံးပြုသူဆက်သွယ်နေ့စဉ်အပေါ် ။ ကလပ်အတွက်အနည်းဆုံး ၃ နာရီ။ ကလပ်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဖြည့်ဆည်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုဒီအသုံးပြုသူများ။ လက်ရှိယူျကြေး:၁-တစ်နေ့အ ၆၅။၀၀ ရူႏွရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ*၁ လ-၂၁၀၀။၀၀ ရူတစ်ပတ်လျှင် ၆၅၀။၀၀ ရူႏွရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ။ *ပဌမနေ့ရက်တစ်ခုမှာ-နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးကာလကုန်ကျစရိတ်၆၅ရူ၊အရာပြီးနောက်စာချုပ်သည်တိုးချဲ့အတြက္တစ္လ၊ငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းသည် ၂၄ နာရီတစ်နေ့လျှင်။ သင်ရပ်ဆိုင်းနိုင်၊အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အဆိုပါစာချုပ်အမည်တွင်သင့်ပရိုဖိုင်းကို-"ဖျက်သိမ်း"။.
ရဲ့ရှိမရှိ၊တစ်ဦးအနိမ့်အရန်စွန့်စားမှုဂိမ်းကို၊အစားအစာ၊လာရောက်လည်ပတ်ဂုဏ်ကလပ်အသင်းသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၏အမျိုးမျိုးရက်စွဲများတွင်၊သင်လျင်မြန်စွာဘယ်အရာကိုရှာတွေ့သင်တို့အဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်း။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးအဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဖက်၊တစ်ဦးသောသူကဲ့သို့၊အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်စုံတွဲတစ်တွဲ၊ဒါကြောင့်အရေးမပါဘူး။ မှကြွလာသောအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊နီးပါးဘာမှမသင်ကဲ့သို့အခွင့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း။ ပင်အ သို့မဟုတ်အက္ခရာစဉ်၊သင်သိလား။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အချို့လူသိများတဲ့ဒေသခံပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အဆိုပါစာရေးဆရာ ။ သို့သော်အခြားသူများစွာရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ။ အချို့ကိုသူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဒီနေရာမှာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကြော်ငြာတွေ။ လျှင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦး၊တစ်ဦးသောသူ၊သို့မဟုတ်အများအပြားကလူကြိုက်မယ်လို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ရေးအဖွဲ့၊ဒါပေမယ့်ရိုးရိုး။ သို့မဟုတ်သင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရှိသည်နေ့စွဲများအတွက်၊ဒါကြောင့်သင်အဘို့အရှာကြသည်သောသူအဘို့အသင့်လျော်သည်။ သင်ချင်တယ်တစ်ခုခုကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အရာတုံသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အရက်စွဲများ။
babilejo ruleto kun la knabinoj
ကျွမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖုန်း ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့မရှိရင်ဓါတ်ပုံများအတွက်အခမဲ့ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင် ဗီဒီယို အခမဲ့ချိန်းတွေ့